10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siinayo Soo Dejinta Barnaamijyada 2022 | Tilmaan Buuxo
Bogga ugu weyn 10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Soo Dejinta Barnaamijyada 2022 -ka
Yaa leh lacag laguma siin karo soo dejinta barnaamijyada? Hagaag, waa qarnigii 21aad wax walbana waa suurtogal. Soo dejinta barnaamijyada waa hab kale oo lagu kasbado xoogaa lacag caddaan ah oo dhinac ah waana wax aad u fudud.
Waxaa jira dhowr barnaamij oo aad lacag ku soo dejisan karto. Waxaan jecelahay inaan ugu yeero “barnaamijyada lacag -u -samaynta”.
Si aad lacag u hesho, qaar ka mid ah barnaamijyadan waxay kaa rabaan inaad soo dejiso barnaamijyo kale waxayna kugu abaalmarin doontaa dhibco aad ku iibsan karto lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda ah halka kuwa kalena ay kaa rabaan inaad ku darto waxqabadyo kale oo onlayn ah sida daawashada fiidiyaha, qaadista sahanno si aad u magacowdo dhowr oo ay weheliyaan soo dejinta kuwa kale barnaamijyada.
In kasta oo lacagta aad shaqaysato aysan si lama filaan ah kaaga dhigaynin inaad noqoto Jeff Bezos kale, waxay noqon kartaa hustle dhinaca wanaagsan ah oo ku kasbanaya xoogaa lacag ah.
Xusuusnow abka halkan ku qoran gabi ahaanba waa bilaash waxayna lacag ku siiyaan soo dejinta barnaamijyada kale.
Haddii aad la yaabban tahay, maya maahan khiyaamo. Gabi ahaanba waa sharci oo haa, waa lagu siin karaa lacag si aad u soo dejiso barnaamijyada.
Aynu bilowno, miyaa? Waxaan dareemayaa inaad runtii u baahan tahay inaad ku qanciso inaad lacag ku heli karto si aad u soo dejiso barnaamijyada.
Runtii ma la I siin karaa Lacag si aan u soo dejiyo Barnaamijyada?
Haa, waxaad gabi ahaanba kala soo degsan kartaa barnaamijyada lacag. Waxaa jira dhowr nooc iyo meherado doonaya inay dadka lacag siiyaan si ay u tijaabiyaan badeecadooda ama u soo dejistaan ​​barnaamijyadooda lacag la'aan. In kasta oo summadaha qaarkood ay siiyaan isticmaaleyaasha si ay u soo dejistaan ​​barnaamijyada, kuwa kale waxay bixiyaan si ay u qaataan sahanno onlayn ah, oo ay ku sameeyaan cilmi -baaris suuqgeyn, iyo waxyaabo kale oo badan.
In kasta oo ay u muuqato mid aad u fudud in lagu soo dejiyo barnaamijyo lacag ah, fududaynteeda waa in aan la iska indho tirin maxaa yeelay hadda waxaa jira qiyaastii 4.57 bilyan oo isticmaaleyaal firfircoon oo internetka ah.
Taasi waa tiro aad u badan oo dad ah oo doonaya inay ogaadaan sida loo sameeyo lacag soo dejinta barnaamijyada. Shirkaduhu waxay si fudud uga faa'iideysan karaan oo alaabtooda suuqa uga saari karaan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa muhiim ah inaad ogaato in barnaamijyada lacag lagu soo dejisto aysan si toos ah kaa dhigaynin bilyaneer laakiin waxay kugu kasban kartaa inaad ku bixiso biilasha taleefanka, ama khidmadda baska ama ku kasbato wax dheeraad ah jeebkaaga. Tani waxay noo horseedaysaa dooddeena xigta.
Intee In La'eg Ayaan Ii Bixi Karaa Soo Dejinta Barnaamijyada?
Xaaladaha caadiga ah waxaad ka kasban kartaa meel kasta oo u dhaxaysa $ 10- $ 20 bishiiba barnaamijyadan lacag-sameynta sharci ah waxaan sharxi doonaa waqti yar. Tani ma laga yaabaa inay kaa dhigto hodan laakiin siyaabo qaar bay waxtar u yeelan kartaa.
Si kastaba ha ahaatee, raadintaada inaad ku soo dejiso barnaamijyada lacag ahaan, aad bay muhiim u tahay inaad ka digtoonaato barnaamijyada ku weydiinaya inaad lacag iska bixiso si aad isu diiwaangeliso, ka dibna, waxaad bilaabi kartaa inaad kasbato. Qaarkood xitaa way sii socdaan si ay u buunbuuniyaan dakhliga soo gala. Ka fogow barnaamijyada noocaas ah maadaama ay haystaan ​​fursado sare oo ay ku noqon karaan khiyaano.
Markaan aqbalnay tan, bal aan eegno sida lacag loogu sameeyo soo dejinta barnaamijyada.
Sideen Lacag U Siin Karaa Soo Dejinta Barnaamijyada?
Lacagta laga bixiyo inta badan barnaamijyadan waa caddaalad ku filan, umana baahna dadaal badan. Xaaladaha badankood, waa inaad soo dejisaa barnaamijka oo aad dhowr jeer u isticmaashaa si aad ugu qalanto dhibcaha aad ku beddeli karto lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda.
Waxaa la yiri, aan ku bilowno liiskeenna 10ka hab ee ugu fiican ee lacag laguugu soo dejiyo barnaamijyada
Swagbucks waa mid ka mid ah barnaamijyada abaalmarinta shabakadda ee ugu caansan oo hubiya inaad abaalmarin u hesho hawlaha caadiga ah ee aad ku sameyso internetka.
Markaad isqorto, waxaad ogaan lahayd inay jiraan siyaabo badan oo lacag lagu kasbado, mana aha kaliya inaad soo dejiso barnaamijyada kaligaa. Waxaad daawan kartaa fiidyowyo, ka dukaameysan kartaa tafaariiqlaha aad ugu jeceshahay, sahan ka qaadi kartaa, ka raadin kartaa shabakadda, heli kartaa heshiisyo wanaagsan, oo xitaa ciyaari kartaa ciyaaro.
Waxaad kasban kartaa dhibco oo ku soo ceshan kartaa dhibcahaas kaararka hadiyadaha ee Amazon iyo Walmart ama ka soo cesho PayPal.
Haddii aad rabto inaad lacag ku soo degsato barnaamijyo, waxaa jira qayb ka mid ah barnaamijka Swagbucks oo loogu talagalay tan sidoo kale. Waxay u shaqaysaa dadka isticmaala Android iyo IOS labadaba.
Ha ka welwelin, ma aha khiyaamo, maadaama Swagbucks ay siisay isticmaaleyaasheeda lacag ka badan $ 463 milyan oo kaash ah isla markaana ay siiso in ka badan 7000 kaararka hadiyadda maalin walba.
Booqo websaydhka Swagbucks si aad isu qorto oo aad bilowdo kasbashada maanta!
#2. Qabta Qodobbada
Barnaamij kale oo aad lacag ku soo dejisan karto waa Points Grab. Ka caawinta Swagbucks, kani waa barnaamijkayga aan jeclahay inaan isticmaalo.
Qaabka hawlgalka Point -ku waa mid aad u fudud oo hufan. Xayeysiiyayaashu waxay lacag siiyaan si ay u helaan ka-qaybgal- taasi waa faallooyin, aragtiyo, is-dhexgal bulsho. Si tan loo sameeyo, GrabPoints waxay shaqaaleysiisaa isticmaaleyaal, xubno aniga oo kale ah, iyo adiga inaad sameyso howlo onlayn ah sida Daawashada Fiidyowyada, Qaadashada Sahaminnada, Dhammaystirka Dalabyada, Soo dejinta Barnaamijyada, iyo Inbadan!
Oo malee maxaa? waxaad kasbataa intaad hawlahan qabanayso. Waxaad heli kartaa kaararka hadiyadda ama lacag caddaan ah adiga oo isticmaalaya saaxiib
Gabi ahaanba waa u qabow dhammaan isticmaaleyaasha Android.
Booqo GrabPoints si aad u hesho qaybtaada.
Barnaamijkan lacag-sameynta ah runtii waa fududahay in la isticmaalo. Appdown waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad ku hesho abaalmarino rakibidda barnaamijyada ama adeegsiga adeegyadeeda kale. Maalin kasta, waxay ku daraan barnaamijyo cusub oo aad soo dejisan karto si aad lacag u hesho.
Si aad u isticmaasho barnaamijkan, marka hore ku rakib aaladdaada moobiilka ka dibna tag bogga hore ee abka halkaas oo aad ka ogaan doonto liiska dalabyada. Ka dib markaad xulato midka adiga ku danaynaya, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad buuxiso shuruudaha markaa kasbato dhibco oo aad ku soo furato dhibcahaas abaalmarinnada sida kaararka hadiyadda iyo lacag caddaan ah.
Appdown wuxuu leeyahay gunno gudbinta sare oo ah 50% tanina waxay ka dhigeysaa barnaamij aad u xiiso badan in la isticmaalo. Waxaad ku guuleysan kartaa waxyaabo badan haddii aad leedahay kanaalka YouTube, baloog, ama koonto leh raacayaal badan shabakadaha bulshada.
Waxaan u maleynayaa maxaa yeelay waa wax aad u fudud in la isticmaalo, ma jirto wax xaddidaya taleefan kasta oo android ah oo la adeegsan karo.
Booqo Appdown si aad u soo dejiso barnaamijka oo aad bilowdo kasbashada.
Fiiri dib-u-eegidgan Dib -u -eegista Freemyapps: A App Sameynta Lacagta Sharciga ah ama Fadeexad?
#4. App Money- App Abaalmarinta Lacagta
Sida barnaamijyada kale ee kuu oggolaanaya inaad lacag ku hesho soo dejintooda, waxaad lacag ku kasban kartaa daawashada fiidiyowyada, dhammaystirka sahannada, iyo dabcan, soo dejinta barnaamijyada. Markaad dhammaystirto hawlahan, waxaad kasban doontaa abaalmarino deyn waxaana lagu siin karaa lacag aad u yar ugu yaraan laba maalmood.
Barnaamijkan wuxuu cusboonaysiiyaa shaqooyinkiisa cusub si aadan waligaa uga dhicin fursadaha Lacag -helidda. Waad samayn kartaa mar kasta oo aad raalli ka tahay oo uma baahna dadaal ugu sarreeya.
Si ka duwan kuwa kale, App Money ma bixiyo abaalmarin kaarka hadiyadda ah. Taa bedelkeeda, waxay lacag caddaan ah si toos ah kuugu siinayaan koontadaada PayPal taas oo ku siinaysa fursad aad lacagtaada ugu isticmaasho sidaad rabto. Oo Haa waa la jaan qaada aaladaha Android iyo IOS labadaba.
Bilow kasbashada hadda adoo soo dejinaya abka hoose!
BOOQO APP LACAG
#5. Hadiyadda Boom
Boom Gift waa app kale oo lacag sameynta ah. Waxaad ku heli kartaa abaalmarin kaliya ciyaarista, soo dejinta barnaamijyada, iyo daawashada fiidyowyada. Barnaamijku gabi ahaanba waa bilaash maadaama aadan u baahnayn inaad wax bixiso si aad isu diiwaangeliso. Xaqiiqdii, markaad u gudbiso saaxiib, waxaad helaysaa heerka gunnada gudbinta ee 30%. Nasiib !! taasi aad bay u sarraysaa.
Boom Gift ayaa sheegaya inaadan waligaa ka dhammaan doonin shaqooyinka si aad u dhammaystirto maaddaama ay maalin walba cusboonaysiiyaan howlaha.
Waxaad ku heli kartaa abaalmarino lacag caddaan ah ama kaarar hadiyado kala duwan oo kaliya adigoo soo dejinaya barnaamijyada. Looma baahna in laga walwalo haddii ay sharci tahay ama khiyaano maxaa yeelay waxay bixiyeen abaalmarin ka badan $ 10 milyan.
Si aad u isticmaasho, u soo dejiso barnaamijka, isku day mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada liiska ku jira si aad u hesho dhibco, oo markaad hesho dhibco kugu filan, markaa waxaad ku soo furan kartaa abaalmarino kala duwan. Qof walba wuu kasban karaa lacag maadaama loo heli karo adeegsadayaasha Android iyo IOS labadaba.
Soo dejiso hadiyadaha kor u kaca oo bilow kasbashada hadda.
HADIYADA BOOQO BOOQO
#6. App-ka Karma
AppKarma waa mid ka mid ah barnaamijyada caanka ah ee ku siiya lacag si aad u soo dejiso barnaamijyo kala duwan. Waxa layaabka leh ee ku saabsan barnaamijkan ayaa ah in inta badan xoogga la saaro soo dejinta iyo la ciyaarista barnaamijyada.
Marka, uma baahnid inaad dhammaystirto hawlo kale sida qaadashada sahannada internetka iyo helitaanka heshiisyo waaweyn. Waxay ku habboon tahay kuwa doonaya inay lacag ku helaan barnaamijyadooda soo dejinta. Haddii aad asxaabtaada u gudbiso barnaamijka, waxaad helaysaa gunno gudbin ah 30%. Markaad gasho, waxaad kasbataa 30% waxa ay kasbadaan!
Haddii aad sidoo kale leedahay joogitaanka warbaahinta bulshada ee sare Youtube ama Instagram, AppKarma ayaa kaa caawin kara inaad lacag samaysato. Waxaa loo heli karaa aaladaha Android iyo IOS si uusan qofna u seegin.
Saxiix si aad hadda u kasbato.
InstaGC sida barnaamijyada kale waxay siisaa isticmaaleyaasheeda fursad ay ku kasbadaan lacag caddaan ah inta ay samaynayaan waxqabadyada tooska ah ee khadka tooska ah ee ay sameeyaan sida daawashada fiidiyowyada soo dejinta barnaamijyada iyo qaadashada sahannada. Marka laga tago habkan caadiga ah ee dhibcaha lagu kasbado, waxaa jira wax kale-Sawirka-sideed Hawlaha.
Xubnaha gaara heer gaar ah ayaa galaangal u leh shaxda Sideed hawlood. Looma heli karo isticmaale kasta. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad dhammaystirto hawlahaaga isla markiiba isla markaana aad hesho dhibic. Hawlahan waa sahlan yihiin in la dhammaystiro oo uma baahna macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Si aad u hesho hawshan, dhammaystir hawlo badan oo leh noocyo kala duwan, oo aad yeelato boqolkiiba sax ah. Tani waxay kaa caawineysaa inaad kordhiso heerkaaga, taas oo ku siineysa inaad tan hesho. Waxaad akhrin kartaa wax badan halkan
InstaGC waxay siisaa isticmaaleyaasheeda abaalmarin qaab Bitcoin, kaararka hadiyadda, Jeegga, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaad dhihi kartaa waxay leedahay mid ka mid ah nidaamyada abaalmarinta ee ugu kala duwan waxaana kaliya loo adeegsan karaa Miiskaaga.
Booqo InstaGC si aad wax badan uga ogaato
On Irazoo, waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijyo oo aad ku kasban kartaa dhibcaha Irazoo oo aad ku soo iibsan karto dhibco. Si kastaba ha noqotee, Irazoo waxay leedahay xubno dhinac saddexaad ah taas oo macnaheedu yahay inay kugu toosin karaan meelo kale si ay u soo furtaan dalabkaaga.
Markaad iska diiwaangeliso Irazzo, waxaad kasban doontaa 100ka dhibcood ee ugu horreeya oo aad ku soo furan karto abaalmarinnada sida ciyaaraha iyo elektiroonigga ee magacyada waaweyn sida GameStop iyo Best Buy. Ama waxaad go'aansan kartaa inaad iyaga lacag caddaan ah uga furto Paypal.
Tirakoobka barnaamijyada ayaa maalin walba cusboonaysiiya si aad u hesho barnaamijyo cusub oo xiiso leh oo aad ka doorato maalin kasta. Irazoo waxay taageertaa aaladaha Android iyo IOS taas oo macnaheedu yahay lacag qof walba leh!
Hadda ka bilow kasbashada Irazoo!
#9. App Nana
Tani waa mid toos ah. AppNana waxaad ku heli kartaa barnaamij kasta oo lacag lagu bixiyo oo bilaash ah. Waxay u shaqaysaa sida kuwa kale. Waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso barnaamij oo aad kasbato waxa loo yaqaan “Nanas” ka dibna ku soo fur barnaamijyadooda midkoodna la bixiyo ama xitaa kaarka hadiyadda ee xulashadaada oo u dhexeysa Amazon ilaa Xbox.
Ma aha oo kaliya in lagu siiyo lacag si aad u soo dejiso barnaamijyo cusub, laakiin sidoo kale waad heli kartaa iyaga. Ha ka welwelin, AppNana ma aha khiyaamo maadaama ay leedahay rikoor ah inay siiso isticmaaleyaasheeda in ka badan $ 9 milyan oo deyn ah. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa aaladaha Android iyo IOS.
Booqo AppNana si aad hadda u kasbato.
BOOQO APP NANA
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska AppLike Dib -u -eegid Buuxda: Samee Lacag aad u badan soo dejinta Barnaamijyada
#10. Lacag loogu talagalay Barnaamijyada
Isu -soo -uruurinta liiskeyga siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag laguugu soo dejisto si aad u soo dejiso barnaamij waa Lacag Lacageed. Barnaamijkan waa habka ugu dhaqsaha badan ee lagu helo Kaararka Hadiyadda iyo Iibsashada In-App si loo soo dejiyo mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadooda cusub.
Barnaamij kasta oo aad soo dejiso, waxaad kasbataa dhibco oo waxaad ku soo ceshataa dhibcahaas kaarka hadiyad kasta oo aad dooratay oo u dhexeeya kaarka hadiyadda ee iTunes ilaa Walmart, eBay, iyo waxyaabo kaloo badan! Lacagta loogu talagalay Barnaamijyada waxay taageertaa aaladaha Android iyo IOS labadaba.
Isku qor Lacag -bixinta Barnaamijyada si aad u hesho kaarka hadiyadda ee bilaashka ah.
BOOQO CASHKA AQBALADA
Doorashada App -ka ugu Fiican ee La Adeegsado
Haddii aad jeceshahay inaad sahamiso adduunka teknolojiyadda iyo hal -abuurka ama aad si sax ah u tijaabiso barnaamijyo cusub, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale lacag ku hesho dadaalkaaga.
Waxaa jira siyaabo badan oo lacag looga helo raaxada gurigaaga, soo dejinta barnaamijyada waa mid ka mid ah. Isticmaal liiskan kore si aad u ogaato sida lacagta laguugu soo dejiyo si aad u soo dejiso barnaamijyada ama si ka sii fiican u dhigto barnaamijyada soo dejinta lacag ahaan.
Haddii uu jiro app aad jeceshahay inaad ku darto, si naxariis leh u isticmaal qaybta faallada.
Waxaan u malaynayaa inaad kuwaas oo kale aragto
TV -yada Cable dambe ma jiraan: 15 barnaamijyo TV oo bilaash ah
Lacag Ku Bixi Imtixaannada Barnaamijyada: 20 Website oo Ku Bixiya Lacag Ka Badan $ 10
Sheeg shan qof oo ka daalay inay helaan lacag badan? Maqaalkani waxa uu qeexayaa habab hal abuur leh oo lagu sameeyo…
Sida Loo Noqdo Iibiyaha Alaabta & Ka Faa'iideyso 2022 | Tilmaan Buuxo
Mid ka mid ah meheradaha ugu fudud ee la bilaabi karo haddii aad raadinayso buuq dhinac ah waa dib -u -iibinta…